Facial mask sheet နဲ့ wash off mask တွေ ဘာကွာတာလဲ??? | OnDoctor
Beauty industry ကြီး ခြေလှမ်းစိတ်လာတာနဲ့ အမျှ အရေပြားကို အထူးတလည် care ပေးနိုင်တဲ့ mask တွေကလဲ အမျိုးအစား ပေါင်းစုံထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိက ကျတဲ့ အမျိုးစား ၂ ခုက facial mask sheet တွေနဲ့ wash off mask တွေရဲ့ ကွာခြားချက်လေးနဲ့ အသုံးပြုပုံလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာတွေရဲ့ အလှပရေးရာ ဝန်းကျင်မှာတော့ ပေါင်းတင်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့နော်။ အရေပြားကို ပိုမိုကောင်းမွန်နူးညံ့သွားအောင် ပုံမှန်သုံးနေကျတွေထက် mask တွေတင်ပြီး nourishing လုပ်တာကို ဆိုလိုတာပါ။
အဲ့ထဲမှာမှ wash off mask ဆိုတာ ဘာလဲ??
Wash off mask လို့ခေါ်တဲ့ လိမ်းလိုက်ပြီး ခြောက်သွားရင် သို့ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာရင် ရေနဲ့ သစ်ချလိုက်ရတဲ့ အမျိုးစားပါ။ ရွှံ့စေးတွေ ဝါးမီးသွေးတွေကို အခြေခံပြီး လုပ်ထားတာ များပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ Deep Cleansing Mask အမျိုးစားတွေပါ။ Deep Cleansing ဆိုတဲ့အတိုင်း အရေပြားရဲ့အတွင်းပိုင်း ချွေးပေါက်တွေထဲအထိ အညစ်အကြေးအမှုန်အမွှားတွေကို ဝင်ရောက်သန့်ရှင်းပြီး ပုံမှန် မျက်နှာသစ်ဆေးတွေနဲ့ မပြောင်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပေါ်ကဆဲလ်အသေတွေ မိတ်ကပ်အကျန်တွေ အဆီကြေးညှော်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို စုပ်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သန့်စင်ပေးကြပါတယ် ။
Deep Cleansing mask တွေထဲမှာ အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတာတွေက oxy bubble mask လို့ခေါ်တဲ့ လေနဲ့ထိတဲ့အခါ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ဓာတ်ပြုပြီး လေပူဖောင်း bubble တွေထလာပြီး အဲ့ bubble လေးတွေက ချွေးပေါက်ထဲကအညစ်အကြေးတွေဝင်ရှင်းပေးတဲ့ mask တွေ ၊ Peel off mask လို့ ခေါ်တဲ့ လိမ်းပြီးခြောက်သွားရင် ဆွဲခွာပေးရတဲ့ ဆားဝက်ခြံနဲ့ black head တွေပါသွားတဲ့ mask တွေ ပါ ရှိလာပါပြီ။
သူတို့ အားလုံးရဲ့ အခြေခံက သဘောတရား အလုက်လုပ်ပုံကတော့ deep cleansing လုပ်ပေးတာပါ။
ဒီ mask တွေကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ကနေ လိုအပ်သလောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သေချာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သုံးပေးရင် အမာရွတ်တွေ အမဲစက်တွေ ပါးသွားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ မျက်နှာအဆီဖုတွေပျောက်တယ် ။ ဆားဝက်ခြံနဲ့ black head ပျောက်ပြီး အဆီထွက်တာနည်းသွားပါတယ် ။ Skincare လိမ်းသမျှကိုလည်း အရေပြားကအကုန်လက်ခံနိုင်အောင် စုပ်ယူမှု အားကောင်းအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
အသုံးပြုပုံကတော့ မျက်နှာသစ်ပြီးပြီးချင်း ဘာ skincare မှ မလိမ်းခင်မှာ သူတို့ကို သုံးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးမှ ပုံမှန်အတိုင်း skincare အပေါ်က လိမ်းပေါ့။ mask sheet တွေနဲ့ တွဲသုံးပေးရင် mask sheet ရဲ့ အာနိသင် ပိုထိရောက်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရနေတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင် မျက်နှာဖုံး sheet mask တွေပါ။ သူတို့တွေကတော့ Nourishing အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။
အရေပြားကိုရေဓာတ်ဖြည့်တာကနေစလို့ အဆီဓာတ် အာဟာရဓာတ် လိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို ကိုယ့် အရေပြားနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ဟာ ရွေးခြယ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ အမျိုးအစားအများကြီးရှိတဲ့ mask လေးတွေပါ ။ ကိုးရီးယားကားတွေ မှာ ကပ်ကပ်နေတာတွေပေါ့။
ဒီ mask တွေက အထုတ်ကလေးတွေကို ဖောက်ပြီး အထဲက အဖတ်လေးကို ကပ်လိုက်ရတဲ့ပုံစံပါ။ ဒီပေါင်းတင်တဲ့ mask sheet လေးတွေရဲ့အဓိကအားသာချက်က ပုံမှန် skincare လိမ်းတာထက် သူ့ကိုကပ်ပေးတဲ့အာဟာရက မျက်နှာထဲကို အဆများစွာပိုရောက်ပါတယ် ။ Skincare လုပ်ဖို့မအားတဲ့သူတွေဆို တစ်ညတစ်ခုလောက်ကပ်ပေးရင်တောင် တစ်နေကုန်ဘာမှမလိမ်းပဲနေလို့ရပါတယ် ။Mask sheet လေးတွေကတော့ တစ်ပတ်နှစ်ခါကနေ နေ့စဉ်အထိအသုံးပြူနိုင်ပါတယ် ။
ပုံမှန်သုံးပေးရင် အရေပြားအိုမင်းမှုကိုအကြာကြီးဟန့်တားနိုင်ပြီး အမြဲလိုစိုပြေတင်းရင်းတဲ့ အသားရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်ရှင်။ အပေါ်က deep cleansing mask တွေ သုံးပြီး mask sheet ကပ်ပေးတဲ့အခါ သူ့မှာ ပါတဲ့ အာဟာရတွေကို အရေပြားက ပိုမိုစုပ်ယူမှုအားကောင်းတာမို့ တွဲသုံးဖို့လဲ အကြံပေးပါရစေနော်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ mask ၂ ခုရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သိပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ အားလုံးပဲ လှပတဲ့ အသားရည်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
Scarlette ဆေး ၁